Kusho ukuthini ukuphupha ngesiliva? – iAfrika
Umbala wesiliva emaphusheni umele ukuzizwela ngenhliziyo, inhlanhla, noma izenzakalo eziziqondanelayo. Ukuzizwela ngenhliziyo noma ukuqondiswa ngaphakathi kukusiza ukhethe lokho okuzokuholela kulokho okudingayo empilweni, ukuqondisisa kabusha, amandla amasha noma inkululeko entsha etholakala ngokuvela ngethuba.
Okubi wukuthi isiliva lingaba uphawu lokuthi unebhadi noma uzwa sengathi akukho okukusebenzelayo.
Ukuphupha ngezinto zesiliva kumela ukuzizwela ngenhliziyo noma inhlanhla ehambisana nanoma yini into eyimelayo.
Ukuphupha ngezingubo ezinombala oyisiliva kumela ubuwena, bunenhlanhla noma buzizwela ngenhliziyo. Imibala emibi ehamba nesiliva njengobomvu, omnyama noma onsomi ngobumnyama kungasho ibhadi ongenakho ukukwazi ukulibalekela.
Isizathu sokuthi isiliva limela ukuzizwela ngenhliziyo kungenxa yombala wenyanga kanye nokukwazi kwenyanga ukwenza abantu bezizwe babe nehlanhla noma babe nebhadi.
6 thoughts on “Kusho ukuthini ukuphupha ngesiliva?”
02/01/2019 at 06:31
Kusho ukuthini ukuphupha umuntu osewashona efuna ukugada ingane ibathe iyakhasa ayivimbe afune size kuye ukuzoyigada
Ndiphuphe uMama ethwele iqhiya emnyama (ikhetshemiya) uMama akathwali akatshatanga lichazani eliphupha
Ukuphupha ufake I ring e silver emnweni wase left kuthetha ukuthini
Kusho ukuthini ukuphupha izimedali lezi ezisetshenziswa amaKhatholika
Ukuphupha inyoka ekuhlaza namabala amancane amnyama
Ukuphupha uncelisa ingane ubisi luluningi kakhulu